Ingcamango yomtshato wesimboli, ngokungathandabuzekiyo, kufuphi nabo banandipha iincwadi zeTolkien, iincwadi kunye neefilimu kule ndlela, abo banomdla ngabalinganiswa bezo zinto kunye nomoya wabo. Ngomntu obini kunye nomoya othabisayo onothando owenza umdla ngezinto ezimangalisayo, umtshato omnandi uya kuba yindlela efanelekileyo kakhulu yokulungiselela le holide engalindelekanga.
Isikhundla seengcamango ekuhleleni umtshato onjalo mkhulu kakhulu. Ukukhethwa kwabasandul 'ukutshata kunye neendwendwe kunikezelwa ngobuninzi beempawu, kwiingubo eziza kuvela kwimibhiyozo yomtshato. Ngokomzekelo, umtshakazi nomyeni baya kuba mhle kwaye bahloniphekile, kunye neendwendwe zabo, iindwendwe, iinkosikazi kunye nookumkani okanye mhlawumbi amaqhawe efilimu INkosi yeeRings - elf Legolas, u-Aragorn onesibindi, uGendalph ohlakaniphileyo.
Kungcono ukulungiselela iholide ehlobo, kuba kufuneka ukuba kwenzeke kwindawo evulekile. Kuhle kakhulu, ukuba kunokwenzeka ukuqasha indlu yelizwe okanye isiseko sezokhenketho ehlathini.
Umtshato ungabanjwa kokubili ngesimo sesidlo, kunye nefomini. Ingongoma kuphela ukusetyenziswa kwenkonzo yokutyelela umtshato, njengoko umoya wefantasti awubandakanyi umzi osemzimbeni kunye nenkumbulo enhle yeofisi yokubhalisa. Omnye akufanele avumele ukugquma kweemoto, ukuhamba kweemoto kunye neendonga zamatye esi sixeko ukuphula umtshato walo mzuzwana. Imibhiyozo mayiyenze ngokubambisana nangokuvisisana nendalo.
Iidable zomthendeleko womtshato ziya kuba zikho phantsi kwekhava enkulu enemibala enkulu, nangona kunjalo, ukuba oko kungabonakali okwenene, i-glade eluhlaza kunye neholo elikhulu iya kufaneleka ezi njongo. Ukulungiswa kwegumbi okanye indawo apho inxalenye enkulu yeholide iya kuyenzeka ayifanele ibe yinto ekhanyayo okanye ekhanyayo. Umhlobiso ocebileyo, oqaqambileyo apha, uya kuba lukhulu. Ukulula kunye nobabalo, imibala yemvelo kunye nokukhanya kufuneka kuphumelele kuyo yonke into. Kuya kukwanela ukusebenzisa iitampu ezinemibala, amagatsha aluhlaza kunye neentyantyambo ezinjengezihombo.
Kuyo yonke indawo, kwiindawo ezingalindelekanga unokulungiselela amakhandlela amakhulu okanye amatsha amancinane, ukwenzela ukuba xa ubusuku bendawo lukhanyisa izibane ezintle.
Izambatho ezifanelekileyo kakhulu kumyeni wefantasi kunye nomtshakazi ziinqwelo ezindizayo ezihamba ngeenqwelo ezinqabileyo, ezinqabileyo kunye ne-laconic. Bangakwazi ukuhlotshiswa ngeempahla zemibala okanye imidwebo efanayo kunye neenkxaso zee-runes. Uboya ekhumbeni, ezinqabileyo ezinobuncwane zifanelekile njengezinto zokuhlobisa entloko.
Ngenye indlela, umtshakazi unxiba ingubo ende, egqoke isiGrike - kunye nezandla zakhe zivulekile, umva wakhe kunye neqondo elibi. Kwiinyawo zabasandul 'ukutshata, kukulungele ukugqoka iibhotile zasehlotyeni, izihlangu zesikhumba okanye i-moccasins. Esikhundleni sesigubungelo somtshakazi kwizinwele, kufuneka siveze iintyatyambo ezitsha okanye sihombise intloko yakhe ngentsimbi entsha.
Izambatho zeendwendwe kufuneka zihambelane nomxholo weeholide. Kuya kuba mnandi xa beza emtshatweni kwimpahla yeendiza ezifaniyo. Unokwazi ukuvakalisa kwangaphambili kwiindwendwe ukuba umtshato uya kuba yinto ekhethiweyo yeendleko ezigqwesileyo kunye nokunikezwa komvuzo ozukileyo kumqhubi. Oku kuya kubangela ukuba banomdla kubo ekudaleni impahla ekhethekileyo.
Emtshatweni wendlela yokumangalisa akufuneki ukuba ube nexhala kumnye wabakhoyo, kuba kunamathuba amaninzi okufumana iziindwendwe ezizonwabisa kule ngongoma.
Amadoda kunye namantombazana abo ahamba nawo ngokuqinisekileyo baya kufana nokuncintisana nokugubha. Abalinganiswa ababiyo banokuyalelwa ukuba babambe umtshakazi, kunye nomyeni kunye nabo bonke abanye ukuba bamhlangule ekuthinjweni "kwee-orcs ezimbi". Imihlanga eyahlukeneyo, imisebenzi enengqiqo, iinguqu ezihlekisayo, i-jocular fortune-tell and, ngokuqinisekileyo, umncintiswano wengubo - konke oku kuya kutyhola bonke abavakalisi.
Kwaye ke, akukho nxaxheba encinci kwimibutho yemitshato kwindlela yokumangalisa idlala ngumculo. Akukho ziqhyqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqngqcngccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc Njengomculo womculo kunye nomculo womdaniso, kufuneka ukhethe kuphela iingoma zomthonyama.
Umtshato ngesitayela se-shebbie-chic: i-charm yamandulo
Umtshato ogwini lolwandle
Umtshato kwindlela yaseMpumalanga
Umtshato ngohlobo lwabantu baseRussia
UGalkin noPugacheva abasayi kubafihla abantwana
Uncedo lokuqala loBumnandi: Iingcebiso zam ezinzulu ezivela eGuerlain
Isobho sehlobo esineziqhamo
Iingxaki zeengqondo zentsapho emva komtshato
I-cookies "Ikhofi yobusana"
Isaladi kunye neodle i-noodle
I-Horoscope ye-2015 yeSagittarius
Ikhukhi kunye ne-rosemary kunye nama-walnuts
Kwiphepha le-Apgar-ubude kunye nobukhulu
Umkhwekazi ufuna ukuhlala nathi
Intombi, ngaba ufana namakhwenkwe amantombazana?